ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှုကိုရင်ဆိုင်သောစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကုထုံး - ၂၀၁၂ သင်၏ ဦး နှောက်သည်
တစ်စုံတွဲအပြင်းအထန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ (2012) နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကုထုံး
Ford၊ ဂျက်ဖရီဂျေ၊ ယာရက်အေဒူစချီနှင့် Darrell L. Franklin ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကုထုံး။ ” မိသားစုကုထုံး၏အမေရိကန်ဂျာနယ် 40.4 (2012): 336-348
ညစ်ညမ်း ပို. ပို. ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏တိုးပွားလာရရှိနိုင်မှုညီစုံတွဲများ '' ဆက်ဆံရေးကိုသာသက်ရောက်သည်။ ဆက်ဆံရေးဆိုးရွားစွာညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်ပြီး, ထို့ကြောင့်ကုသသူတို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းမှစွဲရုပ်သိမ်းရေးနှင့်သည်းခံစိတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုသည်, အာရုံကြောသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်အဆိုးဆက်ဆံရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ သို့သော် Clinician တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားအစှဲအဖြစ်အညီအမျှအမျှဒုက္ခဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤစာတမ်းသည်အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲနှင့်အတူတစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုကို အသုံးပြု. ညစ်ညမ်းစွဲ၏အောင်မြင်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကုထုံးကုသမှုအကောင်အထည်ဖော်မှုစူးစမ်း။